Benicasim - Costa Azahar - Nharaunda yeValencian - Spain
Benicasim iri makiromita gumi nematanhatu kuchamhembe kweguta reCastellón de la Plana, kuchamhembe kwakanyanya kweValencian Nharaunda.
Iyo inisiparasi uye spa iri mudunhu reCastelló, kuCosta del Azahar muSpain. Iyo Sierra del Desert de les Palmes, inoenderera mukati, inodzivirira guta kubva kumhepo yekuchamhembe. Iri zita rinotorwa kubva kurudzi rweBanu Qasim, chikamu cheKutama Berbers chakagara munzvimbo iyi panguva yekukunda kweArabhu kweSpain muzana ramakore rechisere.
Benicasim iri makiromita gumi nematanhatu kuchamhembe kweguta reCastelló de la Plana, kuchamhembe kwakanyanya kweValencian Nharaunda. Guta rine huwandu hwevagari ve13. Hupfumi hwayo hwakavakirwa zvakanyanya pakushanya; iro guta rinozivikanwa nemabhichi aro uye mimhanzi mhemberero dzakadai seBenicàssim International Festival (FIB) uye Rototom Sunsplash.